Thursday 8th December 2016 17:59:16 in by Super Admin
Hargeysa(Haleel)-Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa marka laga hadlayo wada
hadal uu la bilaabo Somaliya iyo heshiisyo ay wada galaan, wuxuu taagnaa mawqif cad oo adag. Madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin, wuxuu taagnaa mawqif aad u adag, marka laga hadlayo wada hadal uu la bilaabo dawlad ay Somaliya leedahay, waxaanu ku xidhay shuruud adag oo ah inay Somaliya aqoonsato qaranimada Somaliland.
Ambassador Donald Yamamoto, oo wakhtigaas ahaa safiirka Maraykanka u joogay Itoobiya, ayaa Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin iyo xubno wasiiradiisa ka mid ahaa oo la socday su’aalay sida uu u arko xidhiidh dhex mara Somaliland iyo dawladii Cabdilaahi Yuusuf. Daahir Rayaale Kaahin ayaa sida warbixintaas ku cad ku jawaabay, "Wax heshiis ahi suurtogal maaha inta uu Cabdillaahi Yuusuf sii wado sheegashada Somaliland. Waxaanu intaas raaciyay, "50,000 (Konton kun oo ruux), ayaa u dhintay dagaalkii gobanimada Somaliland lagula soo noqday. Marka ay sidaas tahayna xalka keliya ee jiraa waxa weeye inay Somaliya ogolaato inaanu noqono laba qaran oo siman oo ah Somaliland iyo Somaliya.
Daahir Rayaale wuxuu weeraray dawladda Somaliya ee uu wakhtigaas Cabdillaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa, "Dawladda ku meelgaadhka ah ee Somaliya waxay ceeb ku tahay dadka Somaliyeed.”, isagoo uga jeeday inaanay wax la taaban karo tarin dadka ay wakiilka ka tahay.